Naanị n'ihi na ị na-abịa gafee a ahịa na ọ apụtaghị na ị kwesịrị ị na-eme ya - ị ga na-eme amụọ na ị nwere ike ijikwa na gị ugbu a nkà larịị na ego ike. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, oge gị ga-adị mma, maka gị.
Ị ghaghị ịmekọrịta gị na ihe mgbaru ọsọ gị & ọhụụ maka ọdịnihu gị, ọ bụ nnwere onwe ịmara ozugbo ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ego maka gị, mgbe ụfọdụ ọ na-enwe ike ịjụ ịjụ ya ozugbo n'ihi na ọ dabara na profaịlụ gị na-enyere gị aka ile anya ọkachamara na ndị ọzọ n'ihi na ị na-elekwasị anya, ọ na-azọpụta gị oge dị ukwuu.
Dị ka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ị na-agbanwe ụdị ihe ị na-eme (tupu i nwee ọtụtụ ahụmahụ) ị ghaghị ịmụta nkà ọhụrụ ma kpọkọta ozi ọhụrụ oge ọ bụla. Ozugbo ị mara otu ụdị ihe onwunwe na otu ụdị azụmahịa ị nwere ike isi na-emeso ihe ị nwere ike ime, ị nwere ike ịgabiga. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịghọ ezi ọkachamara, ị ga-enyela onwe gị ụzọ dị ịrịba ama na mpi gị.
Ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọzọ ka ị ga-enwe, ọ ga-abụ maka onye ọzọ, yabụ dị ka akụkụ nke ihe ọmụma mpaghara gị, ị ga-ekwenye na ị maara ndị egwuregwu niile na mpaghara gị na ihe ha nwere - mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịgafe azụmahịa na ị gaghị chọrọ ime, na-atụ anya na ị ga-eme ka iwe mmeghe na ụzọ. N'ụzọ dị otú a, ị bara uru site na ndị na-emekọ ihe n'enweghị ọdịda gị na iru ọhụụ gị.
Emela nkwekọrịta naanị n'ihi na e nyere gị ya, Gaa ya ma ọ bụrụ na oge erughị gị
EKWỌ ỤBỌCHỊ - Chee echiche banyere ikike ego gị na ikike gị n'ime ụlọ ọrụ ihe onwunwe. Chọpụta ndị mmadụ ị nwere ike ịmekọrịta ihe ị na-apụghị ime maọbụ na ị chọghị ime (maka ego!)